Kôlômbia: Sarotra Ny Manavaka Ny Olona Tsara Fanahy Sy Ny Ratsy Fanahy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Janoary 2018 14:57 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, Swahili, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, Español, Français, English
Voalohany, nanao diabe manohitra ny tafika mitam-piadiana tsy nohelohina tamin'ny fahafatesan'ireo zatovolahy noho ilay antsoina hoe (Fampanantenana Fitaka) ireo reny sy ny fianakaviany. Tao anatin'ny toe-draharaha farany indrindra mikasika ity fampanantenana fitaka ity, dia voalaza fa noraofin'ny tafika ireo zatovolahy niaraka tamin'ny fampanantenana asa tany amin'ny faritra ambanivohitra izay avy eo namonoana azy ireo ary nolazaina fa mpikamban'ny mpiady anaty akata novonoina tamin'ny ady izy ireo. Navotsotra anefa ireo miaramila miisa 17 voaheloka tao amin'ny tafika rehefa dila ny fe-potoam-pitsarana azy ireo.
Ireo ny vondrom-piarahamonin'ireo indizeny Nasa ny vondrona faharoa, izay afaka nanararaotra nilaza ny tantara tsy navoakan'ny haino aman-jery matetika tamin'ny alàlan'ny fantsona YouTube. Tamin'ity tranga ity, navela tao amin'ny faritra nisy ireo indizeny ireo vanja milevina, sy ireo fitaovam-piadiana mipoaka hafa izay teo afovoan'ny faritra nifandiran'ny vondrona mitam-piadiana ara-dalàna sy tsy ara-dalàna. “Manadio” tsy tapaka ny faritra ny sampan-draharahan'ny fiarovana ny indizeny, anisan'izany ny trano, mba hanalana ireo fitaovam-piadiana izay navelan'ny tafika nasionaly sy ny mpiady anaty akata. Ao anatin'ilay lahatsary, mangataka ny tafika mitam-piadiana izy ireo mba hampiato ny fametrahana vanja milevina na farafaharatsiny mba ho tonga haka ireo baomba tsy mbola nipoaka alohan'ny tsy handehanan'ireo vondrom-piarahamonina tompotany eo ambonin'izany .
Amin'ity ohatra fahatelo ity, nanadihady ny polisy iray momba ny fahitany ny faran'ny taona ny gazety iray teo amin'ny manodidina. Tao anatin'ity antsafa ity, mitondra ny lohateny hoe “Mitandrema amin'ny olon-dratsy manodidina anao”, dia nilaza ny zava-nitranga iray ilay manampahefana izay nahitana vondron-jiolahy iray nipetraka tao amin'ny tranobe tsara tarehy ka nahavariana ireo mpifanolo-bodirindrina taminy, satria nivarotra an-tsokosoko fitaovam-piadiana izy ary nafenina tao anaty kitapo natao ho an'irony raquettes fanaovana tennis irony izany. Ny torohevitr'ilay polisy ho an'ny olona tsirairay no tena nahagaga hoe: mitandrema ianareo amin'ny mpiray monina aminareo ary raha mahita zatovolahy manam-bola be mipetra-drery ianareo ka mihinan-kanina any ivelan'ny tranony matetika izy ary mitondra zatovovavy tsara tarehy ao an-tranony, indrindra raha toa izy ireo ka tahaka ny zazavavy mpivarotena dia mety ho mpikambana ao amin'ny mafia izany olona izany.